Sawirro: Madaxweynaha oo shaaciyey wixii uu kala soo kulmay Baydhaba - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Madaxweynaha oo shaaciyey wixii uu kala soo kulmay Baydhaba
Sawirro: Madaxweynaha oo shaaciyey wixii uu kala soo kulmay Baydhaba
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaliya iyo wafdi uu hoggaaminaayo ayaa goordhow ka soo dagay garoonka diyaaradaha Muqdisho, iyagoona ka yimid magaalada Baydhabo oo maalmihii la soo dhaafay ay ku suganayeen.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa soo dhaweeyay madax ka tirsan dowladda oo uu ka mid yahay ra’iisal wsaaraha iyo labda golle ee xukuumadda, intaas kaddib waxaa loo galbiyay aqalka madaxtooyada,mana jirto cid saxaafadda la hadlay sidda uu soo sheegay wariyaha Caasimada Online ee Muqdisho.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa muddo seddax cisho ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay, halkaasoo ay ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay dhismaha labo maamul oo iska soo horjeeda.
Madaxweynaha ayaa ka hor inta aanu ka soo tagin Baydhabo wuxuu kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiin kala taageersan labada maamul ee lixda gobal iyo seddaxda gobal, wuxuuna kala hadlay in la qaboojiyo xiisada ka taagan Baydhab.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada-hadallo iyo la tashiyo la soo sameeyey qeybaha kala duwan ee Bulshadda kuna dhiiro-geliyey in artagtida kala duwan lagu xaliyo wadahadal ,dib-uheshiisiin, is-afgarad iyo nabad.
“Maanta fursad ayeynu heysanaa waa inaad isku dulqaadataan oo aad meel wada fariisataan si mar walba midnimadda loo ilaaliyo. marar badan ayey dhibaato ka timid is-maqli waa iyo dulqaad yari.
Dowladda ayaa hormuud u ah wax walba oo dalka ka socda iyada ayaana masuuliyadda leh marka waa in Dowladda looga dambeeyo waxyaalaha loo igmaday” ayuu yiri Madaxweynahu.
Ugu dambeyntii Hogaamiye dhaqameedyadda iyo dhammaan dadkii kale ee uu la kulmay Madaxweyanaha ayaa ka mahad-celiyey booqshadda labadda maalmood ahayd ee uu Madaxweynahu ku joogay Baydhabo. Sidoo kale Madax Dhaqameedyada Ballan qaaday inay sii wadayaan wadahadaladda Dowladdana la shaqeynayaan.
Magaalada waxaa weli ku sugan guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo la sheegay in uu kulamo la qaadan doono dhinacyada isku haya magaalada.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu ku wajahan yahay magaalada Brussels ee dalka Belgium kaddib markii uu casimaad ka helay madaxda dalkaas.